Maahmaahda Ugu Liidata Waa: ‘Guri Kasta Waxuu La Xiran Yahay Dhibtiisa’ | http://kismaayodaily.com
Aqristow marka hore aan ku xasuusiyo wiilkii Soomaaliyeed ee ka yaabiyey Aduunka oo dhan ee gobolka California (kaliforniya), ee dalka Maraykanka, isaga oo isku qariyey meesha ay diyaaraduhu ku xaraysataan taayarada marka ay hawada galaan, taas oo ah mid taageeraysa arimaha aan ku xusi doono qoraalkaygan.
Wiilkaas in uu qatartaas u bareero waxaa keenay jacaylka uu u qabo Hooyadiis oo uusan sanado badan arkin, maqlina, iyada oo sida la sheegay loo diidey in uu la hadlo Hooyadiis macaan. Marka is waydii inta caruur ah ee aad taqaan, deris la tahay ama aad qaraabo tihiin oo aan loo ogolayn in ay Aabahood ama Hooyadood xariir la yeeshaan, taas oo ay sabab u tahay Hooyadii iyo Aabihii oo ku kala tagay xumaan meel dheer gaartey.
Aan u soo noqdo ujeedada qoraalkayga, nin dhalin yaro ah oo aan deris ahaan jirnay, ayaa u soo cabtey oday, isaga oo ka cabanaayey xaaskiisa, odaygii ayaa ku yiri “Guri kastaba waxaa uu la xiran yahay dhibtiisa”, sida aan u fahmayna waa maahmaah ka mida maahmaahyada Soomaalida Bari, Galbeed, Waqooyi ama Koonfurba meeshay rabto ha ka soo jeedee.
Ninkii ayaa ii sheegay maahmaahda, markaas ku iri “weligay ma maqlin maahmaadaan”, laakiin waa arin dhaba in guri kasta ay tiisa haysato. Hase yeeshee, waxaan kula qabaa in aad adigu masuul ka tahay gurigaaga, guryaha kalena dadka iska leh ay masuul ka yihiin sidii ay u badbaadin lahaayeen, ee waxaad utagtaa culimada bal in ay iyaga ku caawiyaan.
Mid kale, caruurteyda ayaa waxay kubada lugta (football) la cayaaraan caruur uu dhalay nin Oromada Muslinka ah oo aan deris ahaan jirnay. Maalin maalmaha ka mida, ayuu isu’aalay wadanka aan ka soo jeedo. Waxaan u sheegay in aan Soomali ahay. Ninkii ayaa aniga oo aan ka filaynayn waxaa uu yiri “waxaan ku koray magaalada Minneapolis, waxaana iskoolka la dhigtey caruur badan oo Soomaali ah, inta badana waxay ii sheegeen in ay la nool yihiin Aabahood ama Hooyadood midkood” waxa uu intaa ku daray “Soomaalidu waxay isu guursadaan maxaa ka galay oo kale, waxayna isu furaan maxaa ka galay oo kale”
Runtii waa wax laga naxo in ajnabiga ay dareemeen arintaan marka loo fiiriyo Soomaalida nafteeda oo aan u war hayn arimahaan, laakiin lama yaabaayo sababtoo ah intii aan u soo guurin magaalada Minneapolis, ee gobolka Minnesota, waxaan deganaan jirey magaalada Arligton, ee gobolka Virginia oo ah meeshii la dejiyey racii ugu horeyey ee qaxootigii lagu qaabilay dalka Maraykanka, oo intooda badan ka dib u guuray gobolada kale ee Mareykanka. Waxaan maalin maalmaha ka mida kula kulmay magaalada Arlington nin dhalin yaro ah oo soo booqdey walaashiis oo aan isla shaqayn jirnay. Waxaan ku iri fadlan iiga waran magaalada Minneapolis, oo aan maqlay in Soomaalidu ku badan tahay, aana rabo in aan guur, shaqo iyo waxbarasho u doonto hadii ALLAH yiraahdo?
Waxaa uu igu jawaabey “ha u guurin magaalada Minneapolis maxaa yeelay waa meel ay Soomaalida isku aroosaan, todhobaadna isku furaan”. Waxuu hadalkiisa ku daray “waa meel ay qoysaska Soomaalidu ku mashquulsan yihiin dagaal dhex yaal, meeshii ay ku mashquuli lahaayeen mustaqbalka caruurtooda” Waa run in ay qoosas fiican jiraan, laakiin lama hilmaami karo dumista qoosaska Qurbojoogta meel kasta oo ay joogaan oo soo badanaya.
Inkasta oo aniga iyo in badan ALLAH naga samatabixiyey arintaan, laakiin waxaa jira guryo badan oo xil naga saaran yahay in la badbaadiyo, waa hadii ay culimada, waxgaradka iyo qaraabada qooysaska Soomaaliyeed ay isku meel ka istaagaan dadaalka badbaadinta qoysaska ee sida maalaayacniga ah ku duma, iyaga oo maahmaahda aan cinwaanka uga dhigay qoraalkayga dirishada ka saaraaya, ALLAHNA uu AJAR ka siinaayo – InshaaALLAH.
Waxaa soo aruuriyey: Mohamed Barre – Junlay “Buluf” oo wax ka qora arimaha Soomaalida, degana magaalada Minneapolis, MN – junlay99@aol.com
Kismaayodaily On April - 27 - 2014